Maxamed Cabdi Xaashi ma madaxweyne ku-xigeen baa mise madaxweyne ka-xigeen
Dad sheegtay inay laan-dheere ka yihiin degaanka Puntland ayaa waxay ku sheekeeyaan in mas qooqan uu awoowgood ku mataansanaa. Nin Gaalkacyo joogo oo iskuul soo dhigtay oo ka mid ah dadka wax xifaaleeya ayaa yiri yaa wax ku darsankara dad aaminsan in naasleey (mammals) iyo xammaarato (reptiles) ay wada dhasheen? Ninkaasi wuxuu ka hadlayaa abla-ablaynta xayawaanka (classification) ilayn dadku waa naasleey halka masku uu xammaarato ka yahay.
Fikradaas waxaa aaminsan dad badan oo Kornayl C/hi taageera. Waxay la tahay in geesinimadii, gacan-furnaantii, cod-karnimadii iyo maamulkaba C/hi la dhasheen. Geesinimada xaggeeda, maynaan arag waxaan dadkiisa ahayn oo uu gooyey. Tan deeqsinimada ma geel uu leeyahay buu dad siiyey mise xeradii daraawiishta ayuu Ex SRRC iyo midda hadda u qaybiyey? Codkarnimada xaggeeda waa wuxuu u dhaho bad baan bad ku darin. Arrinta maamulkana waa midda ay isu hayaan madaxweyne ku-xigeenka, golihiisa xukuumadda iyo inta badan dadweynaha. Aqoontaas Maxamed leeyahay ayaa tusnay inuusan C/hi ahayn waxa dadku ka sheegayo waana tuu waraysigii u dambeeyey yiri Ilaah kaliyaa Ceeb-Ka-Saliim ah. Ilaah baan ku dhaartee dadbaa C/hi caabuda marka eraygaas uu Maxamed ku hadlay waa xikmad.
Waxay dhaheen “marku kaafku godanyahay kordhow/kordhig looma yeelee” laakiin anigu waxaan aaaminsahay in Maxamed Cabdi Xaashi uu madaxweyne ka xigo C/hi oo uu ka mudanyahay inuu dhamaystiro bilaha ka harsan waqtiga ay qoondaysteen. Waxaan ka wadaa waa inaan kaafka kordhigno ilayn Maxamed waa madaxweyne ka-xige. Waxaa kaaga daran waxaa lagu haystaa ku-xigeenimadii.
Mar kasta waxaa jira dad caqli u-saaxiib ah oo ku dhexjira culumaa’udiinka, issimada, aqoonyahannada iyo guud ahaan dadweynaha oo u kaca danta degaankooda. Inkastoo dadkaa waxgaradki ahi badanyihiin laakiin waxay jecelyihiin in ay afkooda xirtaan. Maanta waxaan halkaan ku soo jeedinayaa hal talo oo ku socota dadweynaha Puntland waxaan rabi lahaa inay si fiican u fahmaan oo ay qaataan. Bishaan Radamaan ee barakaysan bilowgeeda ama dhexdeeda meel ma iska fariisinaa kornayl C/hi? Aan dhahno war dhinac noo dhaaf si nabad ah iyadoo uu madaxweyne sii ahaanayo Maxamed Cabdi Xaashi intay dhalanayso dowlad Soomaaliyeed ama la gaaro July 2004 haddii Ilaah na gaarsiiyo. Waxaan soo taxayaa sababaha keenay arrintaas iyo xalkooda oo wada socda.
1. Annagaa markii horaba C/hi dooraney. Markuu arkay inaysan dadku kala aqoon waxa danta ugu jirto iyo waxa kale doorashadiisa darteed, ayuu goostay inuu khasab ku haysto Puntland oo uu diido go’aankii dadkii awal doortay.
2. Isagoo jebiyey sharcigii uu dhigtay oo ah in madaxweyne ku-xigeenku sii hayo maamulka haddii uu isagu waddanka ka maqanyahay waana arrinta keentay khilaafka jira hadda.
3. Wuxuu nagu diray dadkii dariska ahaa sida Somaliland isagoo abuuray colaad been-abuur ah oo aan jirin. Waa arrintaan waxaan u rabno inuu Maxamed Cabdi Xaashi u sheego Somaliland inuu yiraahdo anagu Soomaali baan nala yiraahdaa ee naga daaya dadweynaha aad beenta ku affuufaysaan. Ilayn C/hi cid lama shiri karo. Reer Waqooyigu way yaqaanaan sidii loogu soo dhoweeyey degaanka Puntland markay ka soo qaxeen Xamar wayna ogyihiin in Puntland ay tahay dalkooda. Markii ay joogeen dadkii ruug caddaaga ahaa sidii Ina Cigaal iyo Maxamed Abshir oo qaxooti meelahaas ku ah arrintu way degenayd waxaan shacabka ka dhaxeeyey walaaltinimo. Meeday walaaltinimadii? Waydiiya C/hi?
4. In Maxamed Cabdi Xaashi uu u baqoolo waddamada muslimiinta iyo kuwa dariska ahba. Wuxuu ka bilaabayaa Jibuuti oo ay naga dhaxayso diin iyo walaaltinimo. Ma C/Qaasim iyo Rayaalaa naga xiga? Sidoo kale markii dowladdii Maxamed Siyaad jirtay waxaan kaalmo ka heli jirnay walaalaheenna Carbeed waxaan filayaa inaan haddeer uga baahi badanahay maalintaas. Marka haddii shacabku doono in C/hi fariisiyo waxaa suurtogal in uu Maxamed howshiisaas sida ugu dhaqsaha badan u gudo-galo. Sidoo kale wuu tagi karaa Itoobiya isagoo u sheegaya in degaanka aan la wadaagno aysan wax dhib ah ku qabin bal iyagoo iska lugaynaya ay maraan. Degaankaas aan sheegayo waa dhul Soomaaliyeed laakiin hadda Itoobiya ayaa xukunta.
5. In Maxamed uu sii wado shirarka Soomaaliyeed ee Kenya ka socda. Shirarkaas waxaa Puntland geed ku xiray C/hi maxaa yeelay ma ahan qof ka gadmi kara Soomaali. Waxaan shakki ku jirin haddii cod la qaado oo Soomaalida la waydiiyo ninkee Soomaaliya ugu dhib badan oo ugu cadow-jecel waxaan labo iswaydiinayn in C/hi koow noqonayo.
6. Maxamed Cabdi Xaashi wuxuu tusay inuusan ahayn nin xukun u waashay oo waatuu ka sariigtay inuu dhiig u daadsho markii seddexdii sano ee hore dhamaatay waana tuu dibadaha iska aaday. Marka haddii uu shirarka tago ma filayo in qab-qablayaashu la tartami karaan maxaa yeelay isagu halkii mar oo la islahaa xukun buu wax u layn ma samayn.
7. Waa nin heli kara codadka ergooyinka Daarood halka C/hi uusan wada helin karin kuwa ay isku magaalada ka yimaadeen.
8. Maxamed Cabdi Xaashi waa nin geli kara arrinta Kismaayo oo C/hi iyo Moorgan wax ka qaban waayeen. Waxaana shakki ku jirin inay is af-garankaraan Isbahaysiga Dooxada Jubba. C/hi iyo Moorgan waa roobkii loo yaqaanay geel-jire bi’iye. Waa roob shuux ah oo uusan qofku ku qabaysan karin kaliya ku kaakiciya wasakhda iyo habeedda. Horrayna waataan ugu sheegay bil-seddex. “gudcur roobaboow ah iyo Alloow ood hanagu goynin”. Waxaan filayaa bil-seddexda waxaan ka waday in hadda la fahmay.
9. Waa nin ogol in la raaco waxa dadku kala saxiixdaan. Sidii horay aan u soo marnay markay seddexdii hore ka dhamaatay waa yeelay. Waa arrintaas waxa ay C/hi isu hayaan oo uu leeyahay dastuurku wuxuu qabaa haddaad maqantahay anaa meesha mas’uul ka ah laakiin C/hi waa diiday. Waxaan ognahay waxaa Xirsi Gaataa shaqada ka qaaday nin sheegtay inuu Maxkamad milatari joogo waana ogayn inuu C/hi taas socodsiiyey halka tii sharciga ahayd ee Maxamed uu C/hi warqad ka soo horjeeda ka soo qoray Kenya.
10. Doorashada Maxamed waxay yaraynaysaa is-qab-qabsiga iyo guul-darrada soo wajahday Puntland. Hadda waad aragtaan in odayaal issimo ahi leeyihiin waxaan la xiranaynaa golaha samatabixinta. Kuwii mucaaradka ahaana waa kuwaas Jibuuti joogo. Gar bay u leeyihiin maxaa jira ninna Soomaali kama maarmo. Qofna ma yeeli karo in C/hi madax-furasho u haysto. Marka haddaynaan hal qof dooran waxaa dhacaysa burbur ku yimaada Puntland.
11. C/hi iyo kuwa la taliya, Cadde Muusaba ha ahaadee ma garan karaan sida arrimuhu u kala horreeyaan. Waxaa burbur ku dhow Puntland oo waxaa is-haya isagii iyo xukuumadiisii isna wuxuu ka hadlayaa arrin kale oo dib loo dhigi karo. Maxay yihiin issimada tagi waayey duugtii Suldaan Hurre oo hadda Gaalkacyo jooga? Anigu waxaan u arkaa inuu caadifad ku raadinayo maaddaama ay is-hayaan madaxweyne ku-xigeenkiisa ayuu is-leeyahay soo jiido qoloda Maxamuud Saleebaan oo dadka tus inuu issimadoodii isu keenay. Isaga iyo Cadde waxay garan la’yihiin sida arrimaha loo kala hormarsho. Arrimahan hadda ka hor waxaa geli jiray issimada Daarood oo dhan laakiin hadda waa arrin cusub. Dilka Suldaanka waxaa loo haystaa C/hi iyo ciidamadiisa marka C/hi iyo ciidamadu ma Maxamuud Saleebaan baa?
12. Abaaraha ka jira degaanka waxba lagama qaban halka lacagtii Puntland lagu khasaariyey sharraxaadda C/hi iyo in martiqaad loo siiyo SRRC timid Puntland. Waa arrintaan waxaan Maxamed u rabno inuu soo shaxaad tago sidii awalba Soomaali caado u ahayd.
13. Waxaan kaloo u sheegi karnaa golaha samatabixinta ee aad mooddo inay C/hi dartiis u midoobeen in Puntland aysan ninna cadow ku ahayn sidoo kalana cadow Soomaaliyeed aysan dabada ku wadan. Inuu u sheego inaan diyaar u nahay dowlada Soomaaliyeed iyo in dadka walaalaha ah wax wada qabsadaan.
14. In Maxamed Cabdi Xaashi uu soo booqdo waddama Yurub iyo Maraykanka sidii uu u saxo caydii ay SHASNA, waa calooshooda-u-shaqaystayaal C/hi taageera oo waxaan Amxaaro ahaynba caaya.
15. Ceebta ugu daran waxay ka soo socotaa inay sheekadu ku socoto marna C/hi marna Cadde Muuse. Mar horaba waxaa geeska la gashay qolyihii markii hore C/hi wada socdeen sidii Xaabsade iyo Seefta Banaanka.
16. Qofkii raba inuu madaxweynanimada Puntland isu sharraxo ha sameeyo ilayn waxa Maxamed xukunka hayaa waa bilo marka ninkii sumcad ku leh Puntlandoow intaad dadka tusi lahayd qabyaalad iyo waxaan fiicnayn la sugo doorashadaas adoon hadhoow ciddi ku dhahayn qabiil baad wax ku heshay.
17. Arrintaas waxaa wax ka qabankara taliyayaasha ciidamada sida Carays oo ay mucaaradka GBP qireen inuu ahaa ninkii ugu macquulsanaa saraakiisha C/hi. Waxay dhaheen inkastoo dagaal naga dhaxeeyey kamuu tagin ehelnimo iyo wada-hadal. Cadde Muuse heshiiskii buu ka baxay markii la isku ogaa in ay GBP hesho taliye booliis ama mid daraawiish laakiin waxaa booliska haddana loo dhiibay Afguduud. Meeyey Cabdi Yaasiin? Waxaa la waydiin Cadde?
18. Haddii aan wax laga qaban qodobadaas aan soo taxay oo aynaan ninkan u dirin isbitaal waxaa dhacaysa in nin walba tuuladii uu ka yimid ku noqdo oo aan sugno waxaa Muuse Suudi iyo golaha samatabixintu Soomaali u keenaan ilayn waakaas Muuse Suudi uu martiqaadka ka helay Qadaafi iyo Carabe. Marka qofkii C/hi qabiil ku raacoow ogoow in marka isagu tago aan ka dabo tagayno.
19. Waxaan dadweynaha Puntland ka codsanayaa gudo iyo dibadba inay taageeraan arrintaas oo ka soo saaraan baaqyo ama sidoo kale ka soo saaraan baaqyo ay leeyihiin taladaydu way khaldantahay. Dadku wuxuu ehel u yahay waa in la isla tasho. Marka talada hala qaato ama inaan khaldanahay soo caddeeya.
20. Haddii shacabka iyo C/hi arrintaas wax ka qaban waayaan waxaan Maxamed kula talinlahaa inuu ka soo tago oo shirarkaas Soomaalida ama dibadaha iska yimaado.
Fiicnaan lahaydaa haddii dadweynaha Puntland arrintaas qaato. Dhowr jeer baan talo ku siiyey odayaasha jaaliyada Puntland ee London laakiin cidna dheg uma dhigin. Nacaybka C/hi loo qabo waxay ka soo daahirtay kuwo wax ku qora internetka oo Soomaali ah oo qaarkood aysan muslimba ahayn, ayaa ku eedaynaya in odaygu ku dheereeyo dilalka iyagoo leh waxaa dhici karta inuu ka dambeeyey lamaanihii Ingiriiska ahaa ee lagu dilay Sheekh. Run ahaantii waa mala-awaal aad u fog ee waxay tuseen nacaybka ay u qabaan. Marka aan eegno maamulka C/hi iyo bilaha soo socda haddii Ilaah idmo.
F.G Waxaa jira kuwo igu eedeeyey inaan reer Sool caayey! Run ahaantii reer Sool waa dadka suugaanta noogu badsha marka maqaalkaygii ahaa goormay reer Sool Carta noqon? Ma cay buu ahaa? Sida cinwaanka ka muuqata waa goormay C/hi iyo taageerayaashiishu ku sheegi doonaan Maxamed Cabdi Xaashi inuu Carta yahay kaddib markay C/hi is-qabteen. Maqaalkana qofna been kagama sheegin. Waxaan xussay in Garaad Saleebaan Nairobi ka joogo issimadii waaweynaa ee Puntland ayna soo wakiisheen kuwa haray. Waxaa warkaas qoray Allpuntland ama iyagaa afkooda ka sheegay. Waa arrintaas midda keentay in reer Sool ugu dhowaan 100% ay fahmeen maqaalka marka labo qof ama seddex eedayntood dhib ma leh.
Faafin: SomaliTalk.com | OCT 24, 2003